Torohevitra 5 ambony momba ny halehibe amin'ny fanadihadiana | Martech Zone
Torohevitra 5 ambony momba ny halebeazan'ny fanadihadiana
Alatsinainy Aprily 23, 2012 Alatsinainy Janoary 22, 2018 Hanna Johnson
Misy fahamarinana tsotra natolotry ny vanim-potoanan'ny Internet: ny fangatahana tamberina sy ny fahazoana hevi-baovao momba ny mpanjifanao sy ny tsenanao kendrena dia mora. Mety ho zava-misy mahafinaritra na mampatahotra izany, miankina amin'ny hoe iza ianao ary inona no tadiavinao hevitra momba izany, fa raha eo an-tsena ianao hifandray amin'ny fototranao hahazoana ny hevitr'izy ireo marina dia manana taonina ianao safidy maimaim-poana sy lafo vidy hatao. Misy karazana fomba azonao atao an'io, saingy miasa aho izao SurveyMonkey, ka ny sehatry ny fahaizako dia, voajanahary, mamorona fanadihadiana an-tserasera izay manome valiny mazava, azo atokisana ary azo ampiharina.
Raisinay ny iraka ampanaovinay anao hanampy anao handray fanapahan-kevitra tsara indrindra, na manandrana manapa-kevitra ny sary tokony hampiasaina amin'ny fonony ianao, ny fanatsarana ny vokatra tokony hatao laharam-pahamehana, na ny mpanamory sakafo hanompo amin'ny lanonam-panombohanao. Fa ahoana raha mbola tsy nanao fanadihadiana an-tserasera mihitsy ianao, na diso hevitra amin'ireo fiasa mahafinaritra rehetra (mandingana ny lojika? Karazan'andriana roa sosona ve io ??)
Hijery ny bika rehetran'ity matoanteny ity eo amin'ny Raki-bolana Volapoky eto amin'i Wikibolana. Skip Logic tsy misy ifandraisany amin'ny tady mitsambikina). Saingy hizara aminareo ireto torohevitra 5 ambony ato anaty ireto aho hamoronana fanadihadiana amin'ny Internet tsara.
1. Farito mazava tsara ny tanjon'ny fanadihadiana an-tserasera
Tsy hanao doka amin'ny doka ianao raha tsy manazava ny tanjon'ny fampielezan-kevitra (hampitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika, handroaka ny fiovam-po, hanala baraka ny mpifaninana aminao sns), sa tsy izany? Ny tanjona tsy mazava dia miteraka valiny tsy mazava, ary ny tanjon'ny fandefasana fanadihadiana amin'ny Internet dia ny hahazoana valiny izay mora azo sy raisina an-tanana. Ny fanadihadiana tsara dia manana tanjona iray na roa mifantoka izay mora takarina sy manazava amin'ny hafa (raha azonao atao ny manazava izany amin'ny 8th mpianatra, eo amin'ny lala-mahitsy ianao). Mandania fotoana mialoha hamantarana, an-tsoratra:
Fa maninona ianao no mamorona an'ity fanadihadiana ity (inona no tanjonao)?
Inona no antenainao fa hanampy anao hanatanteraka ity fanadihadiana ity?
Inona avy ireo fanapahan-kevitra antenainao hisy vokany amin'ny valin'ity fanadihadiana ity, ary inona ireo metatra data ilaina mba hahatongavanao any?
Miharihary ny feo, saingy nahita fanadihadiana marobe isika izay minitra fanomanana minitra vitsy dia afaka nanisy fahasamihafana teo amin'ny fandraisana valinteny kalitao (valiny ilaina sy azo ampiharina) na angona tsy azo adika. Ny fakana minitra fanampiny vitsivitsy eo amin'ny faran'ny fitsapan-kevitra dia hanampy amin'ny fahazoana antoka fa mametraka fanontaniana mety ianao mba hahatratrarana ny tanjona sy hiteraka angon-drakitra ilaina (ary hamonjy anao taonina sy aretin'andoha amin'ny faran'ny aoriana).
2. Ataovy fohy sy mifantoka ny fanadihadiana
Toy ny ankamaroan'ny endrika fifandraisana, ny fanadihadihana an-tserasera dia tsara indrindra raha fohy, mamy ary mitohy. Ny fohy sy mifantoka dia manampy amin'ny kalitao sy ny habetsaky ny valiny. Amin'ny ankapobeny dia tsara kokoa ny mifantoka amin'ny tanjona tokana toy izay manandrana mamorona fanadihadiana master izay mandrakotra tanjona maro.
Ny fanadihadihana fohy kokoa amin'ny ankapobeny dia misy taha ambony kokoa ary ambany ny fandaozana ireo mpandray valim-panadihadiana. Natioran'ny olombelona ny maniry zavatra ho mailaka sy ho mora - raha vao misy mpanadihady mamoy ny fahalianany dia mandao ilay lahasa fotsiny izy ireo - mamela anao amin'ny asa misavoritaka amin'ny fandikana ny antontan-kevitra sasany (na manapa-kevitra ny handroaka azy rehetra).
Hamarino tsara fa ny fanontanianao tsirairay dia mifantoka amin'ny fanampiana amin'ny fanatratrarana ny tanjonao voalaza (Tsy manana izany? Miverena amin'ny dingana 1). Aza manipy fanontaniana 'mahafinaritra manana' izay tsy manome data mivantana hanampiana anao hahatratra ny tanjonao.
Mba hahazoana antoka fa fohy ny fanadihadiana nataonao, manomàna olona vitsivitsy mandritra izany. Ny fikarohana SurveyMonkey (miaraka amin'i Gallup sy ny hafa) dia naneho fa ny ny fanadihadiana dia tokony haharitra 5 minitra na latsaka vao vita. 6 - 10 minitra azo ekena fa hitantsika ny tahan'ny fandaozana lehibe aorian'ny 11 minitra.
3. Ataovy tsotra ny fanontaniana
Hamarino tsara fa tonga hatrany amin'ny fanontanianao ireo fanontanianao ary aza ialana amin'ny fampiasana jargon manokana an'ny indostria. Nahazo fanadihadiana matetika izahay miaraka amina fanontaniana manaraka: "Oviana ianao no nampiasa ny (ampidiro eto ny indostrian'ny teknolojia mumbo jumbo)? "
Aza mieritreritra fa ireo mpaka fanadihadiana dia mahazo aina amin'ny fanafohezan-teny sy ny lingo toa anao. Tsipiho ho azy ireo (tadidio fa 8th mpianatra nitazomana ny tanjonao tamin'ny? Mangataha ny hevitr'izy ireo - tena izy na an-tsaina - ho an'ity dingana ity ihany koa).
Miezaha hanao ny fanontanianao ho manokana sy mivantana araka izay azo atao. Ampitahao: Inona no zavatra niainanao niasa tamin'ny ekipanay HR? To: Hatraiza ianao no afa-po amin'ny fotoana anaovan'ny ekipan'ny HR anay?
4. Mampiasà fanontaniana mifarana mihidy amin'ny fotoana rehetra azo atao
Ny fanontaniana fanadihadiana vita farany dia manome safidy manokana ho an'ny mpamaly (oh: eny na tsia), izay mahatonga ny fandalinana hataonao ho mora kokoa. Ny fanontaniana mikatona dia afaka miova amin'ny eny / tsia, safidy maro, na isa mizana. Ny fanontaniana famaranana momba ny fanadihadiana dia mamela ny olona hamaly fanontaniana amin'ny teniny manokana. Ny fanontaniana misokatra dia tsara hamenoana ireo angon-drakitrao ary mety hanome fampahalalana sy fomba fiasa mahasoa ilaina. Fa ho an'ny tanjona amin'ny famolavolana sy ny famakafakana dia sarotra ny mandresy ny fanontaniana mikatona.
5. Tazomy hatrany ny fanontaniana momba ny isa momba ny isa amin'ny alàlan'ny fanadihadiana
Ny mizana mizana dia fomba tsara handrefesana sy hampitahana ireo andiana miovaova. Raha misafidy ny hampiasa mizana naoty ianao (ohatra: 1 - 5) dia alao antoka fa mitazona azy ireo tsy tapaka mandritra ny fanadihadiana ianao. Mampiasà isa mitovy isa amin'ny maridrefy (na tsara kokoa aza, ampiasao ny teny famaritana), ary alao antoka fa ny dikan'ny avo sy ambany dia mijanona mandritra ny fanadihadiana. Ary koa, manampy amin'ny fampiasana isa hafahafa amin'ny naotinao izany mba hanamorana ny famakafakana data. Ny fanovana ny mizana naotinao dia hanakorontana ireo mpaka fanadihadiana, izay hitondra valiny tsy azo itokisana.
Izany no ho an'ny torohevitra 5 ambony ho an'ny fahalehibiazan'ny fanadihadiana, saingy misy taonina zavatra manan-danja hafa tsy tokony ho adino rehefa mamorona ny fanadihadiana an-tserasera ianao. Jereo indray eto raha mila toro-hevitra bebe kokoa, na jereo ny bilaogin'ny SurveyMonkey!
Tags: fanontaniana famaranana akaikyfanontaniana fanadihadiana misokatramizana mizanamandingana ny lojikafamolavolana fanadihadianahalavan'ny fanadihadianatanjon'ny fanadihadianafanadihadianatoro-hevitra momba ny fanadihadianaSurveyMonkeyfanadihadianazoomerang
Hanna no Social Media Marketer ho an'ny SurveyMonkey. Ny fitiavany ny zava-drehetra ara-tsosialy dia niitatra lavitra ny fantsonan'ny Tweet. Tiany ny olona, ​​ny ora sambatra ary ny lalao fanatanjahan-tena tsara. Nandeha nitety ny kontinanta rehetra izy afa-tsy ny Antarctica, saingy miasa amin'io ...
Tsy ianao no Fortune 500
Aza miloka amin'ny paikady biolojika rehetra